Accueil > Gazetin'ny nosy > Filoham-panjakana nodimandry : Nanaovana fandevenam-panjakana avokoa
Filoham-panjakana nodimandry : Nanaovana fandevenam-panjakana avokoa
Efa maromaro ihany ireo filoham-panjakana teto Madagasikara no nodimandry, ka saika nanaovana fandevenana ara-panjakana sy fisaonam-pirenena avokoa.
Tamin’ny 1975 ny kolonely Ratsimandrava no maty nisy namono, dia teny amin’ny tobin’ny zandary teny Andrefan’Ambohijanahary no niandrasana ny nofo mangatsiakany tamin’ny febroary 1975, ary nanaovana fisaonam-pirenena sy fandevenaa ara-panjakana. Nodimandry koa tamin’ny taona 1976 ny filohampirenena voalohany, Tsiranana Philibert, ka tao amin’ny Kianja Mitafon’i Mahamasina no niandrasana ny nofony. Tamin’ny nahalasanan’ny Jeneraly Ramanantsoa koa, dia navantana teny amin’ny Kianja Mitafon’i Mahamasina ny vatana mangatsiakany rehefa nentina avy any ampitan’ny Ranomasina. Ny lehiben’ny “Directoire Militaire”, tamin’ny 1975 izay tokony hitovy laharana amin’ny filohampanjakana kosa tamin’ny fotoana nahafatesany, dia ny Jeneraly Andriamahazo izany, no toa tsy mba nahazo toerana manokana ara-panjakana. Tamin’ny taona 2018, nodimandry ny Pr Zafy Albert, filohampirenena teo anelanelan’ny 1993-1996, dia teny amin’ny lapan’ny fanatanjahantena sy kolotsaina teny Mahamasina no niandrasana azy.
Nomena ny voninahitra sahaza ny maha-filohampanjakana azy avokoa ireny, ary dia nampanarahan-dia an’izy ireny koa ny vatana mangatsiakan’ny Amiraly Ratsiraka ny Alatsinainy teo, raha teny amin’ny “Chapelle” miaramila teny Soavinandriana no niandrasana ny nofo mangatsikany.
Fa nisy koa ireo Malagasy nanana ny lazany manokana sy ny lanjany manokana teto amin’ny tany sy ny firenena, nefa tsy filohampanjakana, no nanaovana fisaonam-pirenena sy fandevenana ara-panjakana raha maty. Isan’ireny ny Pr Rakoto Ratsimamanga sy ny hafa.